Pazuva rino Antonio Buero Vallejo, mutambi wechiSpanish, akashaya | Zvazvino Zvinyorwa
Pazuva rakaita nhasi, Antonio Buero Vallejo, mutambi wemitambo wechiSpanish, akashaya
Pazuva rakafanana nanhasi, Kubvumbi 28, mutambi wechiSpanish akashaya Antonio Buero Vallejo chigadzikiso chemufananidzo, asi makore 17 apfuura. Nhasi tinorangarira muchidimbu hupenyu hwake nebasa uye tinopa mamwe emitsara yake inozivikanwa. Kana iwe uchida kuziva zvishoma nezve uyu munyori, gara uye verenga chinyorwa chedu.
Kubva yemitambo yemakumi mashanu
Antonio Buero Vallejo aive wevanyori vakakurumbira vemitambo yema50. Akatora chikamu mu Civil War, murwi mumapoka e republican divi. Pakapera hondo, sezvakaitika kune vamwe vanyori, akatongerwa rufu. Kunyangwe mutongo wake wainge "wakanganwirwa", akapedza makore manomwe ehupenyu hwake mujeri. Iyi nhanho yakaratidza basa remunyori wemitambo, uyo aizvitsanangura semunyori ari ega uye anotsigira. Kusurukirwa uku nezvose zvaakasangana nazvo zvakamutungamira kuti ade kuratidza kuburikidza nemitambo yemitambo zvinhu zvakasiyana-siyana sechokwadi, kuratidzwa kuripo, kushoropodzwa munharaunda uye chiratidzo.
Mubasa rake rekunyora tinogona kusiyanisa 3 nhanho dzakasiyana:
Chekutanga chikamu: Iyo zviripo mutambo. Basa rake rakakurumbira kubva padanho iri yaive "Nhoroondo yesitepisi" (1949). Yakaputsa nekusasimba kwemitambo uye yakatanga kuratidza kufarira mune zvemagariro.
Chikamu chechipiri: Icho cheiyo mitambo yenhoroondo. Mabasa maviri akakosha kubva panguva iyi "Las Meninas" (1962) uye "Kurota kwekufunga" (1970). Munyori anotendeukira kune zvakapfuura kuti arege kuvharidzira.
Chikamu chechitatu uye chekupedzisira: Mariri chake kushoropodzwa munharaunda vanoita zvakawanda zvakanyatsojeka uye mamwe anowedzerwa hunyanzvi hwekugadzira. "Nheyo" Iri ibasa rake rinoshamisa kwazvo padanho asi iri futi "Razaro murabharoni."
5 Quotes naBuero Vallejo
"Zvakanaka chaizvo kuona kuti uchiri kurangarirwa." Uyu mutsara wakakwana kuchinyorwa chanhasi. Varume vakanaka vanogara vachirangarirwa ...
«Usamhanye ... Pane zvakawanda zvekutaura nezvazvo ... Kunyarara kunodiwawo».
«Ndinokuda nekusuwa kwako uye neshungu dzako; kutambura newe uye kwete kukutungamira kune chero yenhema nzvimbo yemufaro.
"Une zvisina maturo zvetarenda rako."
Anoda kutenda… Nekuti haachakwanisa kurangarira rwiyo. Nechemumoyo iye apererwa. Uye kana pasina chekutarisira ... chishamiso chinotarisirwa ».
Buero Vallejo akashaya aine makore makumi masere nemasere muMadrid, nekuda kwekusungwa kwemoyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Pazuva rakaita nhasi, Antonio Buero Vallejo, mutambi wemitambo wechiSpanish, akashaya
Nhau. Mazita ekupedzisira kubva kuna Kristin Hannah naGlenn Cooper.
5 vanyori vakuru venhau munhoroondo